Nhare nomwe dzakarongerwa sevateresi & apos; zvinhu izvo zvakakosha mari yakakomba
Kuru Nhau & Ongororo Nhare nomwe dzakarongerwa sevateresi & apos; zvinhu izvo zvakakosha mari yakakomba
Nhare nomwe dzakarongerwa sevateresi & apos; zvinhu izvo zvakakosha mari yakakomba
Kutenga foni kuita mari inochengeterwa vanhu vazhinji kushandisa nguva yakawanda vachifunga nekufungisisa nezvayo, kunyanya nekuti kazhinji kazhinji, pane & apos; s mari yakawandisa inoda kupihwa. Hongu, vazhinji vedu tinogona kuzeza kupedzisa danho rekuti titenge, asi izvo zvinongori chokwadi chezvinhu kana isu & maapuro tichizowana zvazvino uye zvakanyanya kana zvasvika tekinoroji yefoni. Asi kunyangwe iko kwekutanga kudyara kuchikosha kutenga foni, iwe & apos; unoshamisika kuona kuti pane & maapos; s anogona kuwana mari yakawanda inobatanidzwa mukufamba kwenguva - kana zvikaitika kuti uchengete foni yako iri muchimiro chakanaka mushure mekuishandisa kwenguva yakati. .
Iyo inoshandiswa nharembozha indasitiri ine mari, kunyanya kana iwe ukave wakabatirira pane imwe yeaya asingawanzo matombo. Nguva inogona kuita zvishamiso zvezvimwe zvinhu, kusanganisira nharembozha izvo zvave zvishoma uye zviri kure nekufamba kwemakore - zvichivaita zvisingawanzo izvo zvingangokutorera mari hombe kana mamiriro acho akangonaka. Chokwadi, unogona kuyedzwa kuti uitengese nemari inokurumidza mushure megore rekutanga kana rechipiri remuridzi, asi kana iwe & apos; uchikwanisa kumirira kunyange yakatowanda uchizvichengeta zvakaringana panguva iyoyo, chishandiso chako chinogona kupedzisira chaiswa muteresi & apos; s chinhu chakakosha kukosha.
Iyo Nokia 8110 ingaite senge isingazivikanwe foni, asi nekuda kweimwe blockbuster bhaisikopo uye nguva, iyi foni yava imwe yakakomba muteresi & apos; s chinhu! Yakaburitswa kumashure muna1996 nekambani ine mukurumbira yeFinland yakasimudzira shanduko yemazuva ano yenharembozha, iyo Noka 8110 yaive yakasarudzika panguva yayo nekuda kweiyo & apos; inotsvedza 'fomu chinhu iyo yavakashandisa nedhizaini yayo. Nekuda kweichivha chakatsvedza kufumura padhi rekudaira uye kupindura dzinouya nhare, yakazopedzisira yatumidzwa zita rekuti 'bhanana foni' nekuda kwekukomba kwayo kushoma kana ichishandiswa.
Zvino, chakanyatsokwidziridza foni iyi kuti ive muunganidzi & apos; s chinhu chaive chekutanga-pachiratidziro mufirimu ra1999 blockbuster The Matrix, munzvimbo iyo Neo akaendeswa pasuru, kungoiwana & apos; iyo Nokia 8110 iri mukati. Foni inokurumidza kuenderera mberi kurira, uye Neo anotora runhare kana butiro rikango tsvedza kunze. Muchokwadi, zvakadaro, butiro harivhurike roga, asi, iwe panyama unofanirwa kutsvedza iro chivharo pasi, kupesana neyechitubu-yakatakurwa chiito chatinoona munzvimbo neThe Matrix.
Kana iwe ukaitika kuva wako uyu, & chikamu cheiyo nhoroondo yemamuvhi nekuti ndiyo imwe yemafoni mashoma asingakanganwike kuti aoneke mumuvhi. Kutsvaga Nokia 8110 mune mamiriro akanaka pa eBay, iwe & apos; uchavawana vari mumutengo, nechishambadziro chimwe icho maapos ari kukumbira $ 500 yemhando nyowani, isina kuvhurwa modhi. Mazhinji mamodheru epamberi anotangira pamadhora makumi mashanu nemashanu kusvika pamadhora mazana maviri kune avo vane hunhu hwakanaka.
Paunotarisa mafirimu neterevhizheni zvinoratidzwa panguva yema1980 nema1990, ipapo iwe nemaapos ungangosangana neiyo Motorola DynaTAC kakawanda. Ichizivikanwa seyepakutanga 'zvidhinha' nhare nekuda kwehukuru hwayo, iyo yakaverengerwa seinotakurika kana ichienzaniswa nedzimwe sarudzo dzakaburitswa panguva yayo, Motorola DynaTAC yaive ichiri kusimukira kusvika kumashure sa1947. Yakanga isiri & apos; kusvika 1973 apo 'baba vefoni mbozhanhare,' Martin Cooper, akabatsira kusimbisa nzvimbo ye Motorola DynaTAC & apos; nzvimbo mumabhuku enhoroondo nekuisa yekutanga nharembozha vachishandisa vhezheni yefoni.
Pakupedzisira, yaive DynaTAC 8000X yakava yekutanga kutengeswa nhare mbozha kumashure muna1984, uye kubvira ipapo, yakaenderera mberi kubatsira kuunza zera idzva rekufona. Pakazosvika nhasi & maapuro, s 2.5 zvidimbu 'zvidhinha' zvefoni ndiGoriyati, asi kumashure uko, tarisiro yekugona kufonera chero kupi yaionekwa seyakatonyanya kukosha. Panguva yakasvika ma1990, iyo Motorola DynaTAC yakaramba ichiona kuwedzeredzwa kwakati wandei - iine chitarisiko chinoyemurika paterevhizheni 'Saved By The Bell,' pakupedzisira ichinzi 'Zack Morris Runhare.'
Ipo vhezheni yakati wandei yeMotorola DynaTAC yakagadzirwa panguva yayo yekumhanya, mhando inoshanda yeiyo vintage foni inogona kutora kumusoro kumusoro kutenderera madhora mazana mashanu paavhareji. Ndiwo mamwe machunk akakomba ekuchinja uchifunga zvaunogona kutora kwehuwandu hwakaenzana nanhasi maapurofoni. Chikamu chekupenga chekutora iyi ndeyekuti iwe & apos; usatenge icho kuti chishande, asi panzvimbo pezvo, chingori chevateresi & maapos; s chinhu chinoreva kuburitsa mari sezvo nguva yakawanda inopfuura.
Mazhinji emafoni ari pane ino runyorwa akasvika mukurumbira wavo muma1980 kana ma1990, aine mashoma batch ari kuuya mumashure megore ra2010. Zviri nyore, aya mafoni ekare 'evintage' anowanzo kuburitsa kukosha kwakanyanya nekuda kwezera ravo, pamwe nekuti mashoma sei achiri kutenderera. Nokia 808 Pureview yakadzika munhoroondo yenharembozha seimwe yefoni dzakanakisisa dzekamera dzakamboburitswa, zvinova zvinonakidza kana iwe ukafunga mashandisiro anoita Optics uye lens technology kubva payakaburitswa muna 2012.
Chikamu chechikonzero nei Nokia 808 Pureview iri foni isingakanganwike, kunyangwe iyo Symbian chikuva chakadzimwa kwenguva refu, imo nekuti ichiri kurongedza kamera imwe yakakomba - inoshamisa 41-megapixel 1 / 1.2 'sensor ine af / 2.4 Zeiss yese -aspherical 1-boka lenzi. Kana zvasvika pakubvuta mapikicha, iwo & apos; ayo achiri anoshamisa akasiyana-siyana mukutora zvinyoro zvinopinza izvo zvinogona kukwikwidzana nezvakanakisa zvishandiso zvaburitswa nhasi. Uye izvo chete ndizvo zvinoita kuti ive yakadaro muteresi & apos; s chinhu! Iyo 41-megapixel kamera yakaoma kunzwisisa kana tichitarisa zvinhu zvatiinazvo parizvino.
Kunyangwe iyo Nokia 808 Pureview isingawane mari yakawandisa seyedzimwe dzerunhare pane urwu runyorwa, kukosha kwayo hasn & apos; yakaderera zvakanyanya mumakore mashoma kubva payakaburitswa. Muchokwadi, mashandiro emhando mune yakanaka mamiriro anogona kutora pakati pe $ 200 kusvika $ 300, asi iwe unoziva kuti kukosha kwacho kuchazongowedzera sekufamba kwenguva.
Isu & maapos takatotaura nezve maonekero efoni mumabhaisikopo anogona kubatsira kuwedzera kukosha kwavo nekufamba kwenguva. Chakatonyanya kushamisa ndechekuti iyi inotevera nharembozha pane yedu runyorwa inouya kubva kune imwe Matrix bhaisikopo. Ipo iyo Nokia 8110 yakasimbisa chinzvimbo chayo semuteresi & apos; s chinhu nekuratidzwa mune yepakutanga Iyo Matrix bhaisikopo kubva 1999, iyo Samsung SPH-N270 ndiyo yakatonyanya runhare runhare iyo yakaita yayo pa-skrini kutanga muna 2003 neiyi sequel, Iyo Matrix Reloaded. Ino nguva, zvakadaro, iyo Samsung SPH-N270 yainyatso shandiswa naMorpheus muvhi.
Ipo iyo bhaisikopo reNokia 8110 raive rakasiyana neiro chairo-rehupenyu, iyo Samsung SPH-N270 yakaratidza imwecheteyo-yechirimo-yakatakurwa chiito pamwe nezvose prop uye chaiyo modhi. Nharembozha & apos; s yekumusoro yakaputika pakudzvanya bhatani, ichiratidza chinovhara pasi payo uye ichigonesa Morpheus kufona. Zvainyanya kufadza kuona chiito chimwe chete nefoni chaiyo. Yenhare yakaburitswa muna 2003, yakanga isiri & apos; kunyanya yakanyanya kumberi kupfuura avo venguva yayo, asi chiito chakatakurwa nechirimo hachina kutonhorera.
Kutenda kune yaro-skrini nguva muThe Matrix Reloaded, iyo Samsung SPH-N270 yakaenderera mberi nekuona kukosha kwayo zvakanyanya kuwedzera kubva payakaburitswa yekutanga. Parizvino, unogona kuwana foni ichitengesa madhora mazana manomwe nemazana mashanu paavhareji, nekutenda muchidimbu mashandisiro emafoni mashoma kuti awirirane nemuvhi & maapuro; 10,000 kuti ive chaiyo! Kuve uine mashoma kwazvo mamodheru akagadzirwa, iwe unoziva kukosha kwefoni kuchawedzera.
Apple iPhone ('2G' chizvarwa chekutanga)
Kuve chimwe chemagadzirirwo emagetsi akamboburitswa, isu tine chikwereti chakawanda kune iyo yekutanga Apple iPhone yakavambwa kumashure muna 2007. Isati yaburitswa, mafoni emafoni aive akaomarara achitarisa, aiita seanononoka nekuita kwavo, uye vasina kupa & apos; chiitiko chakajeka. Izvo, zvokwadi, zvese zvakashanduka neyakaiswa uye pakupedzisira kusvika kweyekutanga-chizvarwa iPhone, ikozvino inowanzo kunzi IPhone 2G. Izvo zvakatizivisa kune mazhinji emazuvano & apos; s akajairwa maficha, senge capacitive kuratidza, kinetic scrolling, pinch zooming, uye zvimwe zvakawanda!
Payakaburitswa, kwete chete kuti yaive yakakosha kune ese ayo echimurenga maficha, asi zvakare yakakwanisa kusimudza dzimwe tsiye nekuti kusiyana nemakwikwi ayo akabhadharisa rubatsiro nekusaina zvibvumirano, iyo yekutanga iPhone yakatengeswa chaizvo $ 600 pasina kana rubatsiro chero rwekurerutsa. kutenga. Zvakadaro, izvo hazvina & apos; zvinodzivisa vatengi kukurumidza kubhabhadzira iyo smartphone panguva iyoyo. Iyo yekutanga Apple iPhone inoonekwa nevakawanda seimwe yenguva-dzese magajeti akakomberedza, ndosaka iyo & apos; inowanzoonekwa seyakaunganidzwa & apos; s chinhu.
Kunyangwe hazvo paine zviyero zvine mukurumbira mukutenderera uye zvinowanzo kutengeswa online nevatengesi, mamodheru ari mune yakanakisa mamiriro anogona achiri kuraira yakakosha huwandu hwemari. Zvichiri nani, pane mamodheru achiri mumapakeji avo epakutanga aenda kunotora zviuru zvemadhora - saka kukosha kwefoni pasina mubvunzo kucharamba kuchikura nekufamba kwenguva.
Isu takachengeta imwe yefoni yekupedzisira mune yedu runyorwa rwechimwe chinhu chakasarudzika, sezvo ichi sanganisa zvese zvemazuvano zvefoni, yakasanganiswa neimwe yemaitiro akasarudzika mufoni. Kutanga, Motorola Aura R1 yakaburitswa pazera reiyo smartphone kumashure muna2008, asi yaisava chinhu kunze kwekungoshanda kwako nhare mbozha - hapana kwayakazara yakazara seimwe yeWindows Nhare mbozha dziri kutenderera panguva iyoyo!
Chii chinoita iyo Motorola Aura R1 muteresi & apos; s chinhu ndechekuti yakashandisa zvigadzirwa zveprimiyamu nemagadzirirwo ayo - sesimbi isina simbi nesafiri. Vazhinji vakaienzanisa iyo seRolex yemafoni nekuda kwayo yakasarudzika-senge yekuvhura mashini uye yakakwirira-resolution yakatenderera yakatenderera. Iyo swiveling mashandiro, kunyanya, inokwezva uye kutarisisa nekuti maSwitzerland-akagadzirwa magiya mukati akaumbwa kubva muRockwell akaomesa simbi uye mabhora mabara - zvinoda kutariswa kune zvakadzama zvatinoona mumawadhi mazhinji emhando yepamusoro.
Iko kukosha kweMotorola Aura R1 haina kuderera kubva payakaburitswa muna2008, ichiona kuti yakajairwa modhi yefoni inogona kutora nyore nyore kutenderedza madhora chiuru. Kunyangwe paine mamwe maratidziro akaganhurirwa emafoni akaburitswa, senge iyo yakange yakashongedzwa nemadhaimani, iyo vhezheni vhezheni yeAura A1 ichiri kukosheswa zvakanyanya semuteresi & apos; s chinhu nekuda kwekushomeka kwayo.
Mumwe anogona kukanganisa Nokia 8800 semutsivi akareba-mutsetse kuNokia 8110 yatakambotaura nezvayo pachinyorwa ichi, asi pachokwadi, yaive premium yakavakirwa inotsvedza nhare inoshandisa Nokia & apos; s Series 40 inoshanda sisitimu. Uye zvinonakidza zvakakwana, zvakabudirira neNokia N97. Saka nei Nokia 8800 iri pane yedu runyorwa? Zvakanaka, i & apos; s chaiyo imwe yakasarudzika yefoni iyo isu & apos; yatiri kusanganisira - iyo Nokia 8800 Carbon Arte Edition.
Yakaburitswa kumashure muna2008, iyo Nokia 8800 Carbon Arte yakaratidza zvigadzirwa zveprimiyamu senge isina simbi, kabhoni fiber, uye titanium nemagadzirirwo ayo - zvichipa pfungwa yekuti rwaive runako rusingarambike rwefoni inotsvedza. Zvakafanana nemaitiro eMotorola Aura R1 & apos; s mashandiro, iko kutsvedza kunoitika neNokia 8800 Carbon Arte inoumbwa kunze kwebhora mabheyari kuzadzisa ayo maitiro ekutsvedza anofamba, ayo anofumura ayo manhamba dial pad. Sezvingatarisirwa, iyi chaiyo vhezheni yeNokia 8800 inozivikanwa kune kabhoni fiber yainoshandisa, ichiwedzera kune yayo yekutanga kutarisa uye kunzwa.
Mazuva ano, i & apos; chinhu chisingawanzo kuwanikwa, kuchichiita icho muteresi & apos; s chinhu chakakodzera kubatisisa nekuda kwekukosha kwayakakwanisa kuraira. Kunyangwe hazvo mhando zhinji dzekushanda dzenhare dzichigona kuenda nyore pamadhora mazana mashanu paavhareji, iyo ichiri mari inokudzwa kwazvo yefoni yakaburitswa muna2008, mamodheru akagadzirwa zvakanaka aine kurongedza kwepakutanga anogona kuwanikwa achitengesa kuchamhembe kwe $ 1 000 kuburikidza nevatengesi vakasiyana. uye vatengesi zvakare. Izvo & maapos zviri pachena chitsama chakakosha chefoni isingagoni & apos kukwikwidza kupokana nanhasi & apos; yemazuva ano smartphone kana zvasvika pakushanda, asi ichine dhizaini isingagumi uye yekutanga kunzwa.
Uye ipapo unoenda vanhu, izvo & apos; s yedu yekunyorwa ikozvino! Ndeapi mamwe mafoni asina kuita runyorwa rwedu pano iwe rwaunofunga kuti runofanira kuverengerwa sevateresi & zvinhu zveapos? Iko & maapos angangove akati wandei kunze uko, asi ndokumbirawo usiye chirevo pazasi kuti utiudze zvaunofunga. Isu & apos; tichadzokororazve izvi munguva pfupi iri kutevera kuratidza vamwe vevamwe vari kunze uko, saka usazengurira kutizivisa kuti tigone kuzvitarisa kune inotevera kutenderera.
metro pcs iphone 7 kuburitsa zuva
gadzira nyowani ssh kiyi mac
LG V10 mutengo uye zuva rekuburitsa
Apple iPhone 11, Pro uye Max mutengo uye zuva rekuburitsa
T-Mobile & apos; s Netflix 'freebie' iri kushamisika kuwana imwezve kukwidzwa kwemutengo (kune vamwe)